JOOJI: 80 dal oo ay ku jiraan UK, UAE, France, Israel, Thailand, Aruba oo aan ku jirin liiska safarka!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » JOOJI: 80 dal oo ay ku jiraan UK, UAE, France, Israel, Thailand, Aruba oo aan ku jirin liiska safarka!
Wararka Aruba • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Eswatini Breaking News • Wararka Faransiiska • Faransiiska Polynesia Wararka Breaking ah • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Iceland News Breaking News • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Ha u safrin Aruba, Eswatini, France, Iceland, Israel iyo Thailand
Sida laga soo xigtay CDC, waddammada loo qoondeeyay “COVID-19 oo aad halis u ah” ayaa ku dhacay in ka badan 500 xaaladood 100,000 oo qof oo deggan 28-kii maalmood ee la soo dhaafay. Muwaadiniinta Mareykanka waa inaysan u safrin dalalkan, haddii aan si buuxda loo tallaalin. Maanta 7 dal oo dheeraad ah ayaa lagu daray liiskan.
Liiska 80 -ka dal ee ugu halista badan ee loo safro waqtigan sida ku cad CDC
Dadka Mareykanka ah ayaa looga digayaa qatarta safarka ee sare marka ay booqanayaan Faransiiska, Israel, Thailand, Aruba, Iceland iyo Eswatini.
CDC waxay cusboonaysiisaa liiska meelaha halista badan leh, iyagoo ku daray 7 safar oo caan ah iyo meelaha loo dalxiis tago liiska “ka fogow safarka” qaybta 4 (khatarta ugu badan).
Dowladda Mareykanka ayaa si adag u soo jeedineysa kaliya dadka Mareykanka ah ee si buuxda loo tallaaley inay u safraan Faransiiska, Israel, Thailand, Aruba, Iceland iyo Eswatini
The Xarumaha Maraykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) maanta waxay ku dhawaaqday ku darista toddobo waddan oo dheeri ah liiskeeda 'Heerka 4' ee gobollada soo bandhiga halista ugu weyn ee coronavirus ee booqdayaasha.
Tilmaanteeda, CDC waxay ku talineysaa in gebi ahaanba laga fogaado safarka meelaha loo calaamadeeyay, "Heerka 4: COVID-19 aad u sarreeya," xitaa socdaalayaasha tallaalka si buuxda loo siiyay.
Sida laga soo xigtay CDC, waddammada loo qoondeeyay “COVID-19 oo aad halis u ah” ayaa ku dhacay in ka badan 500 xaaladood 100,000 qof oo deggan 28-kii maalmood ee la soo dhaafay.
7da dal ee dhowaan lagu daray CDC Liiska “Heerka 4: COVID-19 aad u sarreeya” laga bilaabo Ogosto 9, 2021, waa:
4. Faransiis Polynesia
Xeer -ilaaliyaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in qof kasta oo Mareykan ah oo ay tahay inuu u safro goobahan in si buuxda loo tallaalo.
“Socotada si buuxda loo tallaalay uma badna inay helaan oo faafiyaan COVID-19. Si kastaba ha noqotee, safarka caalamiga ahi wuxuu leeyahay khataro dheeri ah, oo xitaa safrayaasha si buuxda loo tallaalay ayaa laga yaabaa inay halis ugu jiraan inay helaan oo laga yaabo inay faafiyaan qaar ka mid ah noocyada COVID-19, ”ayuu yidhi CDC in ay hanuuninta.
Toddobaadkii hore CDC ku daray 16 dal oo ku jira qaybta halista “aad u sarreysa”. Ururku wuxuu si joogto ah u cusbooneysiiyaa liiska ogeysiisyada safarka laga bilaabo Heerka 1 (“hooseeya”) ilaa Heerka 4 (“aad u sarreeya”).
Waqtigaan, CDC waxay uga digaysaa Muwaadiniinta Mareykanka inay u safraan dalalka iyo gobollada soo socda. Si la yaab leh waxaa ku jira Jasiiradaha Virgin ee Mareykanka, oo qayb ka ah Mareykanka.
Ka fogow safarka meelahaas. Haddii ay tahay inaad u safarto meelahan, hubso inaad si buuxda u tallaashay safarka ka hor.
Kani waa liiska dhammeystiran ee waddamada Qeybta 4 marka loo eego Xarunta Xakamaynta Cudurrada ee Mareykanka.
HA U BIXIN 80 dal oo ku qoran:
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo
Morten Litthau Jensen wuxuu leeyahay,
Ogosto 11, 2021 markay tahay 21:02
Qaar ka mid ah waddamada aadan u safri karin
Haddii aan si buuxda loo tallaalin waa qaar ka mid ah waddamada ugu tallaalka badan adduunka.
Dr Basava wuxuu leeyahay,
Ogosto 10, 2021 markay tahay 20:32
Ka warran Ruushka iyo Ukraine?
Ma fiican tahay haddii si buuxda loo tallaalo?